न्यायालयमा समेत राजनीतिक आग्रह ! - चौतारीपोष्ट अनलाईन
ज्योती परिवार नेपालको एउटा प्रतिष्ठित घरानाको रुपमा स्थापित छ । सो घरानाले विभिन्न व्यवसाय गरिरहेको छ । नेपालका बैंकहरुमा उसको करोडौं रुपैयाँ मौज्दात देखिन्छ । यदि सो घरानाले गलत काम नै गरेको भए बैंक खाता रोक्का गर्दा मात्र पनि गलत काम भएको भए उसले सच्याउन सक्थ्यो । त्यसैगरी पत्राचार गरेको भए पनि समस्या हल हुन सक्थ्यो । तर, त्यो बाटो नसमाई अदालतको पूर्ण फैसला नआउँदै पक्राउ गर्नु भनेको राजनीतिक पुर्वाग्रह साँध्ने र प्रतिष्ठित घरानालाई हतोत्साहित बनाई दलाल प्रवृत्तिका व्यवसायीहरुलाई ‘प्रमोट’ गर्न खोजेको त होइन? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । पछिल्लो चरणमा डा. ज्योती राजनीतिक रुपमा साविक माओवादी आन्दोलनसँग निकट व्यवसायीको रुपमा परिचित छन् ।
मुख्य कुरा भनेको देशलाई द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आउँदा भएका राजनीतिक सहमतिलाई अदालतले सहजीकरण नगरेको बुझाइ धेरैको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्धालाई यथावत राखेर जाँदा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र नेपाली कांग्रेस अनि सेना, प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई झस्काइरहन्छ । देश द्वन्द्व, संघर्षबाट गणतन्त्र, संघीयता, समावेशितामा प्रवेश गरिसकेको छ । अग्रगामी परिवर्तन भएको छ । तर, द्वन्द्वकालीन मुद्धालाई अल्झाएर पश्चिमाको गुरुयोजनामा नेपाललाई अनन्त द्वन्द्वमा लैजाने राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रका पात्रको राजनीतिक पूर्वाग्रहको खेती चलिरहेकै छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
Prevदेशैभर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पुतला जलाइयो
Nextइटहरीमा सडकमै लुगा सिलाएर करोडौ कमाउँदै शुशिल